2 Ụzọ Wepụ iPhone Ndi ana-akpo ka vCard / VCF on PC ma ọ bụ Mac
> Resource> iPhone> Olee wepụ iPhone Ndi ana-akpo ka vCard / VCF
Mgbe nile akwado gị iPhone kọntaktị bụ ezigbo àgwà. Ị ga-atụfu niile kọntaktị gị bụrụ na gị iPhone efu ma ọ bụ agbaji. Anyị maara na iTunes nwere ike ime backups mgbe anyị mmekọrịta iPhone na ya (chọta ma na-ele iTunes ndabere). Ma, nkwado ndabere na mpaghara faịlụ bụ keerughi, na ọ na-adịghị ekwe ka ị na-agụ ya n'ụzọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị ike wepụ iPhone kọntaktị na VCF / vCard, ị nwere ike mfe agụ ma dezie ya.
Wepụ iPhone kọntaktị dị ka vCard (VCF) faịlụ, i nwere ike ịgbalị abụọ ngwá ọrụ. Otu ngwá ọrụ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone (iPhone Data Recovery for Mac). Ọ extracts kọntaktị site na iPhone ma ọ bụ iTunes ndabere ka a VCF / vCard File. The ọzọ ngwá ọrụ bụ Wondershare TunesGo (Windows), nke nwekwara-enyere gị aka wepụ kọntaktsị na iPhone ka vCard faịlụ. E wezụga na, ngwá ọrụ a extracts kọntaktị na Outlook, Windows Adress Book, Windows Live Mail.
Ngwọta 1: Wepụ iPhone kọntaktị na vCard File na Dr.Fone maka iOS (Windows & Mac)
Ngwọta 2: wepụ kọntaktị site na iPhone ka VCF na TunesGo
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows), ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac) ekwe ka ị ma ozugbo wepụ iPhone kọntaktị na vCard / VCF, ma ọ bụ wepụ kọntaktị site na iPhone ndabere ka vCard / VCF. Kọntaktị gị gaghị gbanwetụrụ ma ọ bụ chetara.
Download a free ikpe n'okpuru na wụnye ya na kọmputa gị na-enwe na-agbalị.
Nkebi nke 1: Wepụ iPhone kọntaktị na VCF / vCard si iTunes ndabere
Nkebi nke 2: wepụ kọntaktị site na iPhone ka vCard / VCF File
Nkebi nke 1: Wepụ iPhone kọntaktị na vCard / VCF si iTunes ndabere
Nzọụkwụ 1. Họrọ iPhone ndabere ka wepụ
Wepụ iPhone ndabere kọntaktị, ị chọrọ ka mmekọrịta gị iPhone na iTunes mbụ. Mgbe ahụ na-agba ọsọ usoro ihe omume na-aga iji naghachi n'aka iTunes ndabere File n'elu. Ebe a gị iPhone ndabere faịlụ ga-scanned na depụtara. Họrọ onye na a ọhụrụ ụbọchị na pịa Malite iṅomi wepụ ya.
Nzọụkwụ 2. wepụ iPhone ndabere kọntaktị na VCF / vCard
Ihe karịrị kọntaktị, niile ọdịnaya na nkwado ndabere na mpaghara a ga-amịpụtara mgbe iṅomi. Ịnwere ike ihuchalu ha nile nọ na Doppler N'ihi gosiri n'okpuru. Ego kọntaktị gị na pịa Naghachi. I nwere ike ịzọpụta ha dị ka a vCard / VCF faịlụ na kọmputa gị. Ọzọkwa, Wondershare Dr.Fone maka iOS-ahapụ gị wepụ iPhone kọntaktị dị ka a CSV ma ọ bụ HTML faịlụ.
Nzọụkwụ 1. iṅomi gị iPhone maka kọntaktị
Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji iTunes ndabere, i nwere ike iji otú a ka kpọmkwem wepụ kọntaktị site na gị iPhone na a vCard / VCF faịlụ. Ka malitere, jikọọ gị iPhone na kọmputa na-agba ọsọ usoro ihe omume. Usoro ihe omume ga-ewetara gị a window n'okpuru.
N'ihi na iPhone 5 / 4S: Pịa Malite iṅomi ka kpọmkwem iṅomi gị iPhone maka kọntaktị na ya.
N'ihi na iPhone 4 / 3GS, i kwesịrị download a nkwụnye na mbụ, na wee soro nkọwa ịbanye ekwentị scanning mode:
1. Jide gị iPhone, na pịa Malite na-amalite;
2. jide Ike na Home buttons n'otu oge maka 10 sekọnd;
3. Hapụ Ike button na na-na na ịpị Home button ọzọ 15 sekọnd, ruo mgbe ị ga-esi n'ime scanning mode.
Mgbe ahụ, Wondershare Dr.Fone maka iOS ga-akpaghị aka iṅomi gị iPhone maka data na ya na ndị na-ehichapụ-adịbeghị anya.
Nzọụkwụ 2. wepụ kọntaktị site na iPhone ka vCard / VCF faịlụ
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu niile data hụrụ gị iPhone, gụnyere kọntaktị, ozi, foto, ndetu, wdg Lelee ndị ị chọrọ na pịa Naghachi. Ị nwere ike wepụ gị iPhone kọntaktị na a vCard / VCF faịlụ na kọmputa gị ugbu a.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị chọrọ ikewapụ ehichapụ kọntaktị, i nwere ike iji slide bọtịnụ na n'elu na "Naanị gosipụta ehichapụ ihe".
Download free ikpe version n'okpuru na-a-agbalị.
Na Wondershare TunesGo, ị nwekwara ike wepụ kọntaktị site na gị iPhone dị ka VCF faịlụ. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ma na VCF faịlụ na kọmputa gị, ma ọ bụ bugoo ụfọdụ akaụntụ, dị ka Gmail. Ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ oyiri kọntaktsị na gị iPhone, ị nwere ike jikota ha n'ihu adịrị.
Download TunesGo na kọmputa gị na-agbalị ya ugbu a.
Wondershare TunesGo akwado iPhone 5, iPhone 3GS, iPhone 4 na iPhone 4S na-agba ọsọ iOS 5 na iOS 6. Ebe a, ị nwere ike inwe ihe detailes banyere akwado Apple ngwaọrụ na usoro chọrọ.
Nzọụkwụ 1. Wụnye na ẹkedori TunesGo
Ná mmalite, wụnye na ẹkedori TunesGo na kọmputa gị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ nke a window n'okpuru.
Nzọụkwụ 2. Jiri eriri USB jikọọ gị iPhone na kọmputa
Mgbe ahụ, jikọọ gị iPhone na kọmputa site na iji eriri USB na-abịa na gị iPhone. Ozugbo gị iPhone jikọọ, ngwá ọrụ a ga-chọpụta ya na ahụ na-egosi ya na-amalite window.
Nzọụkwụ 3. wepụ iPhone kọntaktị dị ka VCF
Ugbu a, na-ekpe sidebar, pịa "Ndi ana-akpo". Ọ bụrụ na ị ite ke ihe ndekọ na gị iPhone, dị ka iCloud, Exchange na Yahoo !, na kọntaktsị na akụkọ ndị a ga-emere ke "Ndi ana-akpo" udi. Selectively ịhọrọ kọntaktị ma ọ bụ họrọ kọntaktị niile. Pịa "Import / Export".
Mgbe ahụ, esiri-ala menu Pop elu. Dị ka ị na-ahọrọ, pịa "Export kọntaktị ahọrọ" ma ọ bụ "mbupụ niile Ndi ana-akpo". Mgbe ọzọ esiri-ala menu na-egosi, ị ga-ahọrọ "ka otutu vCard Files" ma ọ bụ "a Single vCard File". Nchọgharị gị na kọmputa ruo mgbe ị na-ahụ a na ọnọdụ na-echekwa vCard faịlụ (s).
E wezụga adịrị iPhone kọntaktị na vCard faịlụ, ị nwere ike wepụ ha ka ha Outlook Express, Outlook 2003/2007/2010/2013, Windows Akwụkwọ Adreèsị na Windows Live Mail.
Gbalịa Wondershare TunesGo wepụ iPhone kọntaktị na vCard!
Olee otú Wepụ iPhone Ndi ana-akpo ka CSV on PC / Mac
Olee otú mbupụ iPhone Ndi ana-akpo ka a VCF / vCards
Olee otú mbupụ iPhone Ndi ana-akpo ka CSV enweghị iTunes
10 Ihe na-eme na a Kpọchiri Akpọchi iPhone
Olee otú Jiri Njikwa Nne na Nna na iPhone na iPad
Ihichapụ kpam kpam Ncheta on iPhone na Wondershare SafeEraser
Olee otú Wepụ ozi ederede site na iPhone ndabere